Ny tetikasa fanampiana iThemba Cape Town vaovao an'i Lufthansa dia hitombo bebe kokoa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo » Ny tetikasa fanampiana iThemba Cape Town vaovao an'i Lufthansa dia hitombo bebe kokoa
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • fanabeazana • Zon'olombelona • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Ny tetikasa fanampiana iThemba Cape Town vaovao an'i Lufthansa dia hitombo bebe kokoa.
Nanomboka tamin'ny taona 2019, ny fiaraha-miasa matanjaka amin'ny alliance fanampiana, Mastercard ary "RTL - Manampy ny ankizy izahay" dia niara-niasa tamin'i Beatrice Egli, mpiaro olo-malaza, mba hanomezana ny ankizy avy ao an-tanàna hahazo fanabeazana manara-penitra ary noho izany dia hanafaka azy ireo amin'ny fahantrana, ny tsy fisian'ny asa ary ny tsy fisian'ny asa. heloka.
Ny firaisankina fanampiana no andry ivon'ny fanoloran-tena ara-tsosialy an'ny Vondrona Lufthansa.
Amin'ny maha-orinasa miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ao anatin'ny vondrom-piarahamonina Alemana sy iraisam-pirenena, ny Vondrona Lufthansa dia mandray andraikitra amin'ny fanamby ara-tsosialy ankehitriny ankoatra ny asa aman-draharahany.
Ny orinasa tompon'andraikitra voafetra tsy mitady tombony dia manohana tetikasa maro manerana izao tontolo izao izay manome fahafahana ho an'ny tanora indrindra indrindra amin'ny fianarana sy ahafahan'izy ireo mitondra ny fiainany manokana.
manampy fifanarahana, ny fikambanana fanampiana ny Vondrona Lufthansa, ary Mastercard dia miandrandra ny RTL Donation Marathon amin'ity taona ity, izay hatao ny 18 sy 19 Novambra 2021. Efa afaka manome ny mpijery manomboka rahampitso ho an'ny tetik'asa fanampiana iombonana "Fampianarana préscolaire kilasy voalohany ho an'ny ankizy" ao an-tanàna. ny Capricorn in Cape Town, Afrika Atsimo, ary noho izany dia manohana ny fananganana ny sekoly ambaratonga faharoa iThemba vaovao.
Nanomboka ny taona 2019, ny fiaraha-miasa matanjaka amin'ny manampy fifanarahana, Mastercard ary “RTL – Manampy ankizy izahay” dia niara-niasa tamin'ny mpiaro olo-malaza Beatrice Egli mba hanomezana ny ankizy avy ao an-tanàna hahazo fanabeazana manara-penitra ka hanafaka azy ireo amin'ny firongatry ny fahantrana, ny tsy fananan'asa ary ny heloka bevava. Mba hahafahan'ny zandriny mianatra tsy ho ela miaraka amin'ny ankizy any amin'ny ambaratonga fototra, dia miitatra ny tetikasa iarahana: miaraka amin'ny fanomezana avy amin'ny RTL Donation Marathon amin'ity taona ity, ny trano vaovao ho an'ny préscolaire dia haorina eo an-toerana ihany koa. ny sekoly ambaratonga fototra iThemba.
“Miaraka amin'ny tetikasanay, tianay ny hitondra fanantenana (“iThemba” amin'ny teny Zulu) eo amin'ny fiainan'ny ankizy – amin'ny alalan'ny fidirana amin'ny fanabeazana mialohan'ny sekoly manara-penitra ho an'ny ankizy kely indrindra ao an-tanàna. Tena ilaina ny toerana préscolaire any, ka izany no nahatonga ny préscolaire amin'ny toerana misy azy hatramin'ny farany. Miaraka amin'ny fanohanan'ny “RTL – Manampy ny ankizy izahay” sy ny Mastercard, dia azo atao ny manangana tranobe vaovao ho an'ny préscolaire ary noho izany dia azo atao ny fanabeazana mialoha ho an'ny ankizy sahirana miisa 140”, hoy i Susanne French, Lufthansa Purser, manampy ny birao mpanolo-tsain'ny Alliance mpikambana sy mpilatsaka an-tsitrapo mpandrindra ny tetikasa iThemba.
Peter Bakenecker, Filohan'i Eoropa Afovoany ao amin'ny Mastercard, dia miandrandra ihany koa ny dingana manaraka ny tetikasa iraisana ary faly fa ny fanitarana ny sekoly ambaratonga fototra, izay natomboka tamin'ny taona 2019, dia vita soa aman-tsara tamin'ity fahavaratra ity na dia teo aza ny fameperana an'i Corona: "Ny zava-misy fa ny Vita ara-potoana ny asa fanorenana ny Sekoly Kilonga iThemba na dia eo aza ny fahasarotana dia mampiseho ny habetsahan'ny fiara sy ny angovo entina amin'ny asa eny an-toerana. Vao mainka faly izahay manohy ny fandraisana anjara amin’ny tetikasa iarahana ka mamorona toeram-pialofana sy fomba fijery ho an’ny madinika”.
Ny tetikasa fanabeazana iThemba ao amin'ny Cape Town dia naorina 15 taona lasa izay niaraka tamin'ny Sekoly Preschool iThemba ho toy ny akanin-jaza sy préscolaire mba hanomezana fahafahana hanabe ireo ankizy sahirana avy amin'ny fianakaviana sahirana ara-tsosialy. Nifantoka hatrany tamin’ny fomba fiasa manontolo ny pré-school ary mampianatra ny fahaizana ara-tsosialy ankoatra ny fampianarana Matematika sy ny teny anglisy. Ny fiainana an-tsekoly isan'andro sy ny fianarana miaraka dia mampianatra fifandraisana feno fanajana ary misy fiantraikany tsara eo amin'ny ankizy sy ny tontolo iainany. Ny euro rehetra omena amin'ny RTL Donation Marathon dia handeha amin'ny fanatanterahana ny tranobe vaovao tsy misy fihenam-bidy, mba hahafahan'ny ankizy préscolaire sy ny sekoly ambaratonga fototra ao Capricorn hianatra amin'ny tany iray ihany.